Suuqa: Arteta, Pochettino, Heaton, Iniesta, Seri, Vieira, Alderweireld, Maguire iyo Wararkii ugu Dambeeyay ee Wargeeysyada
Wednesday, January 23rd, 2019 - 21:06:13
Wednesday May 16, 2018 - 16:04:27 in Wararka by
Salaamullah Aqristayaasheena qiimaha badan, waxaan idin soo xulnay wararkii ugu waa weeynaa Suuqa kala iibsiga Ciyaartooyda oo waqti dhow furmi doona.
Xiddigii hore ee kooxda Arsenal ee Mikel Arteta oo 36 jir ah ayaa si aad ah ugu dhaw in uu noqdo tababaraha cusub ee kooxda Arsenal isaga oo shaqada ka badali doona Arsene Wenger kadib markii uu wadahadalo horumar leh la qaatay Maamulka Arsenal(Independent).
Xiddigii hore ee kooxda Arsenal ee Patrick Vieira oo 41 jir ah ayaa niyad jab ka muujiyay kadib markii ay maamulka Arsenal la xiriireen si uu si ku meel gaar ah u qabto shaqada tababaranimo ee Arsenal(Sky Sports).
Tababaraha Kooxda chelsea Mauricio Pochettino ayaa diyaar u ah in uu iska diido kooxda chelsea isaga oo ku faraxsan kooxda Tottenham(Star).
Kooxda Arsenal ayaa wadahadalo la qaadatay xiddiga khadka dhexe ee kooxda Nice ee Jean-Michael Seri oo 26 jir ah kaas oo ay kooxdiisu ku qiimayso 40 milyan oo euro si kasta ha ahaatee kooxda chelsea ayaa hogaaminaysa baacsiga xiddiga(Mirror).
Kooxda Man United ayaa ku kalsoon saxiixa daafaca kooxda Tottenham ee Toby Alderweireld oo 29 jir ah iyada oo ay Red Devils diyaar u tahay in ay 40 milyan ku dalbato xiddiga reer Belguim(Evening Standard).
Kooxda Man United ayaa sidoo kale wadahadalo kula jirta daafaca bidix ee Mattew Bondswell oo 16 jir ah una ciyaara kooxda Nottingham Forest(Mail).
Xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Leicester city ee Harry Maguire oo 25 jir ah ayaa mustaqbalkiisa go,aamin doona kadib koobka adduunka xilli uu xiiso ka helayo kooxo waaweyn premier League(Mirror).
Kooxda Liverpool ayaa ku dhaw in ay heshiiska xorta ah kula saxiixato xiddiga Isaac Christie-Davies oo 20 jir ah oo u ciyaara kooxda chelsea(ESPN).
Kooxda chelsea ayaa loo sheegay in ay haystaan 7 maalmood si ay u helaan adeega tababaraha kooxda Napoli ee Maurizio Sarri ka hor inta ayna kooxdiisu heshiis cusub u soo bandhigin(Mirror).
Kooxda Arsenal ayaa ku dhaw saxiixa xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Sokratis Papastathopoulos sida ay sheegayaan wararku(Mertro).